Amụma Nzuzo | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Ndị na-esonụ na-akọwa Nzuzo maka My Traffic Blog website.
09/22/2021 08:16 elekere GMT
Nzuzo gị dị anyị mkpa. Iji kpuchido nzuzo gị nke ọma, anyị na-enye ọkwa a na-akọwa omume ozi ịntanetị anyị yana nhọrọ ị nwere ike ime gbasara otu esi anakọta ma jiri ozi gị. Agree kwenyere ịnakwere iwu ndị a site na iji nke anyị website n'ụzọ nke ga - eduga gị n'inye anyị ozi nkeonwe.
Iwu Obodo & Ikike ikike
Biko ghota na inwere ike nwe ikike ndi ozo sitere na iwu Steeti dabere na ebe ibi. Ikike ndị a dabere na Steeti nwere ike ịbawanye, sie ike, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ tochie ikike ọ bụla ị nwere nke dị n'okpuru ma ọ bụ n'okpuru iwu Federal. Iwu anyị bụ ịgbaso usoro iwu nzuzo niile nke ikike anyị na-arụ. N'ihi ya, ị nweere onwe iji ozi kọntaktị anyị iji bịakwute anyị n'oge ọ bụla iji kwupụta ikike Ọchịchị ọ bụla.
Nrara Anyị Maka Nzuzo Privacymụaka
Ikpuchido nzuzo nke nwata dị ezigbo mkpa. N'ihi nke a, anyị website agaghị anakọta ma ọ bụ jigide ozi na anyị website site na ndị anyị maara n'ezie nọ n'okpuru 18, ọ nweghịkwa akụkụ nke weebụsaịtị anyị ahaziri iji dọta onye ọ bụla n'okpuru 18.
N'okpuru Usoro Ọrụ na Ọnọdụ ojiji anyị, ụmụaka n'okpuru 18 anaghị ekwe ka ha jiri weebụsaịtị anyị ma nweta nke anyị ọrụ. Ọ bụghị nzube anyị inye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nye umuaka.
Blog okporo ụzọ m na-eji nchịkọta Google iji nyere aka nyochaa etu ndị ọrụ si eji saịtị ahụ. Ngwaọrụ a na - eji “kuki”, nke bụ faịlụ ederede edobere na kọmputa gị, iji kpokọta ozi ndekọ aha ịntanetị na ozi omume ndị ọbịa na ụdị aha. A na-ebufe ozi nke kuki gbasara ihe ị na-eji weebụsaịtị (gụnyere adreesị IP gị) na Google. A na-eji ozi a iji nyochaa ojiji ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ a na ikpokọta akụkọ ndekọ ọnụ ọgụgụ na ọrụ weebụsaịtị.
Anyị agaghị (ma agaghị ekwe ka ndị ọzọ) jiri ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ nchịkọta iji soro ma ọ bụ nakọta ozi gbasara onwe gị nke ndị ọbịa na saịtị anyị. Google agaghị akpakọrịta IP address gị na data ọ bụla ọzọ Google nwere. Ma anyị ma Google agaghị ejikọ, ma ọ bụ chọọ ijikọ, adreesị IP na njirimara nke onye ọrụ kọmputa.
Nwere ike ịjụ iji kuki site na ịhọrọ ntọala kwesịrị ekwesị na ihe nchọgharị gị, mana biko mara na ọ bụrụ na ịme nke a, ị gaghị enwe ike iji ọrụ nke weebụsaịtị a. Site na iji weebụsaịtị a, ị kwenyere na nhazi nke data gbasara gị na Google n'ụzọ na ebumnuche ndị edepụtara n'elu.
Mkpokọta Ozi Nkeonwe
Mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ anyị, adreesị IP ejiri iji nweta weebụsaịtị anyị nwere ike ịbanye yana ụbọchị na oge nnweta. A na-eji ozi a eme ihe iji nyochaa ọnọdụ, na-elekọta weebụsaịtị anyị, na-agagharị ndị ọrụ na-agagharị, ma na-achịkọta ozi igwe mmadụ sara mbara maka iji ya mee ihe dịka nyocha na ọnụọgụ na mmelite weebụsaịtị. Nke kachasị mkpa, adreesị IP ọ bụla edere ejikọtaghị ya na ozi njirimara nke onwe.
Enwere ike ịnakọta ozi ndị ọzọ, nke bụkarịkarị weebụsaịtị kachasị. Dịka ọmụmaatụ, a na-amakarị isi mmalite nke zoro gị na weebụsaịtị anyị. N'otu aka ahụ, oge gị na weebụsaịtị anyị, yana ebe ị na-aga mgbe ị hapụrụ weebụsaịtị anyị nwekwara ike ịdebe. Ihe omuma ndi ozo anakotara gụnyere udiri sistemu komputa ị na eji iji webusaiti anyi. N'otu aka ahụ, a na-ahụkarị ụdị ihe nchọgharị weebụ. Ọzọkwa, nke a bụ nchịkọta data zuru oke, ma na-enyere aka n'ikpeazụ mepụta ezigbo ahụmịhe njirimara.
Kuki bụ usoro ịntanetị ọzọ a na-ahụkarị. Kuki bụ otu ụzọ dị mkpa iji melite ahụmịhe onye ọrụ site na ịhapụ anyị ịhazi ojiji nke weebụsaịtị anyị. A na-ebufe ozi dị mfe na kọmputa gị ka ọdịnaya na ahụmịhe gosipụta omume gị, mmasị gị, na ndị ọzọ. Ga-ekwenye n'echiche na weebụsaịtị anyị na-eji kuki, ma rịba ama na ị nweere onwe gị ime mgbanwe na ihe nchọgharị weebụ gị iji gbanyụọ ndị a ma ọ bụ nata ozi nke kuki ka ị wee nwee ike ịme ihe ọ bụla ịchọrọ. Biko ghọta na ịjụ kuki nwere ike mebie ụfọdụ atụmatụ weebụsaịtị anyị ma mee ka ụfọdụ akụkụ bụrụ ihe na-abaghị uru.
Mgbe ụfọdụ, ị ga-amata ozi ị natara nke ọma, ebe ọ bụ gị bụ ndị na-enye ya. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike comment na a blog post, zaghachi email (ma agbasa ozi n'ikuku ma ọ bụ autoresponder), nye adreesị ozi-e, mezue nnyocha e mere, rịọ SMS, ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, ịzụrụ ihe gụnyere ịnakọta ụfọdụ ozi, dịka ozi kaadị akwụmụgwọ, adreesị Paypal, adreesị nkịtị gị maka ịgba ụgwọ na / ma ọ bụ mbupu, akara ekwentị, wdg. Tojụ ịnye ụfọdụ ozi a nwere ike iduga anyị enweghị ike ịnye gị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị rịọrọ
Nnukwu ihe atụ nke ịnweta oke na weebụsaịtị anyị bụ ebe enwere ike ichebe ọdịnaya site na aha njirimara na paswọọdụ. Ma aha njirimara na paswọọdụ sitere na weebụsaịtị anyị, ma ọ bụ kere gị, ndị a ga-ejikọrịrị ha na ozi ndị ọzọ metụtara ma ọ bụ jikọọ gị. Nke a bụ eziokwu ebe ọ bụ na ọtụtụ ọdịnaya echekwara na ịntanetị bụ ndenye aha dabere na ya, na-akwụkarị ụgwọ. Yabụ, aha njirimara na paswọọdụ ga-enwerịrị njikọta na akaụntụ data gị ọzọ. Aha njirimara na okwuntughe, site na ọdịdị ha, kwesịrị idobe onwe ha.
Ijikwa nke Ozi Nkeonwe
Rịba ama na ozi ọ bụla ị nyere ndị ọzọ ma e wezụga anyị ma ọ bụ ndị na-ere anyị bụ nhọrọ zuru oke. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike igosipụta ihe na post blọgụ comment. Ozi “nzuzo” ahụ bụ “nke ọha” ugbu a, anyị enweghịkwa ikike ịchịkwa nke ahụ. Dị ka ejiji, ị na -ekesa ozi n'etiti ndị ọzọ na ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ dị ka ndị na-eweta ọrụ anyị na-etinye ozi ahụ karịrị njikwa anyị ma bụrụ onye edobere iwu nke ndị ọzọ nwere.
Ebumnuche anyị bụ isi ịnakọta ozi nkeonwe na nkeonwe n'aka gị bụ ịme azụmahịa anyị. Anyị nwere ike iji nke a internally ka mma ijere gị ozi. N'ihi ya, anyị ahụghị ihe kpatara ị ga-eji kerịta ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ na ndị na-abụghị ọdịmma ma ọ gwụla ma ị nyere anyị ikike ime ya.
N'ezie, enwere oge ebe echekwara ozi gị na ọrụ ndị ọzọ na enye, dị ka ọrụ email na enye, ka ha na-enye ọrụ ndị na-eduga n'ịrụ ọrụ na nchekwa ma baa uru karịa onye ọrụ njedebe anyị karịa ịnwale ụdị ọrụ ahụ "n'ime ụlọ." Agbanyeghị, anaghị achọ ka gị na ndị ọzọ dị otu a rụkọọ ọrụ, ha amachaghị etu ha si eji ozi gị, ma ha enweghị ike ree ma ọ bụ bufee ya ndị ọzọ n'ụzọ ọ bụla.
Agbanyeghị, ozi gị nwere akụkụ nke ihe niile. Achịkọta ozi a, n'ụzọ dị iche, enwere ike iji ya ghọta isi ọrụ anyị. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịkekọrịta ozi a gbasara ndị ọbịa webụsaịtị anyị n'ozuzu ya, ọ bụghị n'otu n'otu, ya na ndị ọzọ maka ebumnuche dị iche iche, naanị n'uche anyị.
Ọ bụ ezie na anyị bụ ezigbo ndị na-akwado nzuzo, enwere oge mgbe enwere ike ịmanye anyị ịhapụ echiche ndị a. Dị nnọọ ka isi engines na-eche ihu na-aga n'ihu na-enye data megide uche ha, ya mere otu ihe ahụ nwere ike ime na weebụsaịtị anyị. Omume na-akwadoghị ọrụ ma ọ bụ omume ndị ọzọ dị oke njọ ma ọ bụ ebubo nwere ike ịmepụta ibu ọrụ iwu maka weebụsaịtị anyị. N'okwu ndị ahụ, anyị nwere ikike ịkekọrịta ozi gị, ma ọ bụ nke ọzọ enwere ike ịmanye anyị ịme nke ahụ.
N'aka nke ọzọ, enwere ike inwe oge mgbe ọ ga-adị mkpa ka anyị kọwaa ihe nzuzo gị iji chebe ọdịmma nke anyị. Dịka ọmụmaatụ, n'okwu nke enyo enyo enyo ma ọ bụ ebubo ebubo mmebi iwu nwebisiinka ma ọ bụ mmebi iwu ihe ọgụgụ isi ndị ọzọ, ọ nwere ike ịdị mkpa ịkekọrịta ozi nkeonwe.
Google Adsense na DoubleClick DART kuki
Google, dị ka ndị na-ere mgbasa ozi nke atọ, nwere ike iji kuki iji mee mgbasa ozi na weebụsaịtị a. Ojiji nke kuki DART nke Google nyere ha aka iji ozi mgbasa ozi nye ndi obia nke dabere na nleta ha na weebụsaịtị a, tinyere nleta gara aga, yana weebụsaịtị ndi ozo na ntaneti.
Iji pụọ na kuki DART ị nwere ike ịga na iwu nzuzo nke mgbasa ozi Google na ọdịnaya ọdịnaya na URL ndị a http://www.google.com/privacy_ads.html ckingchọpụta ndị ọrụ site na usoro kuki DART na-agbaso usoro nzuzo nke Google .
Ndị ọzọ na sava mgbasa ozi nke atọ ma ọ bụ netwọk mgbasa ozi nwekwara ike iji kuki iji soro ndị ọrụ na-arụ ọrụ na weebụsaịtị a iji tụọ irè mgbasa ozi na ihe ndị ọzọ a ga-enye na iwu nzuzo ha, weebụsaịtị anyị enweghị ohere ma ọ bụ njikwa maka kuki ndị a enwere ike iji site na ndị mgbasa ozi nke atọ. Agbanyeghị, ịnwere ike ịpụ na ụfọdụ, agbanyeghị na ọ bụghị ha niile, kuki ndị a n'otu ebe dị mfe na http://ww.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Njikọ nke weebụsaịtị nke Atọ
Anyị etinyela njikọ na weebụsaịtị a maka ojiji na nrụtụ aka gị. Anyị abụghị ndị na-ahụ maka iwu nzuzo na weebụsaịtị ndị a. I kwesiri ima na iwu nzuzo nke weebụsaịtị ndia nwere ike idi iche na nke anyi.
Dị ka ị maara, Web 2.0 bụ maka mkparịta ụka a. Ma ọ bụrụ na e bidoghị iwu ndị dị mfe, mkparịta ụka ahụ ga-aghọzi okwu iti mkpu nke ga-eme ka ndị ọzọ ghara ịbanye n'ọgụ ahụ.
Ya mere, nke a bu My Traffic Blog kwuru iwu. Site na ikenye na blọgụ m, ị kwenyere na ihe ndị a:
Ị nwere ike comment n’etinyeghi aha. Nwere ike ịbanye na site na Disqus, OpenID, Twitter, Facebook-ma ọ bụ ma ọlị. Ọ dịzịrị gị. Nwere ike biputere na-amaghị aha. Anaghị m akwado nke a, mana ị nwere ike ịme ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Enwere m ike ịgbanwe iwu a ma ọ bụrụ na emetọ ya.
I nwere ike biputere ajuju ajuju. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, o nwere ike ịbụ na ọ bụghị naanị gị. O yikwara ka ndị ọzọ hà na-eche echiche otú ahụ. Yabụ, m ga-achọ ịnweta azịza gị na My Traffic Blog karịa site na email. O ka mma iji oge m gwa onye obula okwu n’otu oge karia iza otutu ozi email ndi yiri ya.
I nwere ike ikwenyeghi na m. Ana m anabata arụmụka. Agbanyeghị, ana m arịọ ka ọ bụrụ na ị kwenyeghị m - ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ, maka nke ahụ — mee ya n'ụzọ nkwanye ugwu. N'uche m, enwere ọtụtụ iti mkpu na mbara ihu iji kwado ya ebe a.
My Traffic Blog nwere ikike ihichapụ ihe ị kwuru. Nke a bụ blọọgụ m. Enweghị m ụgwọ m ga-ebipụta echiche gị. Ndezigharị Mbụ na-enye gị ikike ikwupụta echiche gị na blọọgụ gị abụghị nke m.
Kpọmkwem, aga m ehichapụ ihe ị kwuru ma ọ bụrụ na biputere ihe ọ bụ, n'echiche m, (a) snarky; (b) isi okwu; (c) onye nwere obi ọjọọ, onye na-akparị mmadụ, onye na-akparị mmadụ, onye na-esogbu mmadụ, iyi egwu, okwu rụrụ arụ, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, mkparị, ụgha, nduhie, ma ọ bụ nke na-emebi ma ọ bụ na-agba ndị ọzọ ume ka ha mebie echiche m na omume ọma ma ọ bụ iwu ọ bụla, gụnyere iwu akụ ọgụgụ isi; ma ọ bụ (d) “spam,” ya bụ, ịgbalị ịkpọsa, ịrịọ, ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ ịkwalite ngwaahịa na ọrụ. Nwere ike, agbanyeghị, tinye njikọ na saịtị gị ma ọ bụ post post gị kachasị ọhụrụ.
Retain na-ejigide nwe ihe ị kwuru. Enweghị m ha ma ana m ekwupụta nkwupụta ọ bụla na ọrụ niile nwere ike ịpụta na ha. Site na ịza ajụjụ na saịtị m, ị kwenyere na ị jigidere ikike niile i nwere n'ihe ị biputere ebe a, na ị ga-ewepụ m ụgwọ ọ bụla na ọrụ niile nwere ike ịpụta site na ọkwa ndị ahụ.
Grant nyere My Traffic Blog ikikere iji biputere azịza gị. Ikike a zuru ụwa ọnụ, enweghị ike ịgbagha, nke na-abụghị naanị, na enweghị eze. Grant nyere m ikike ịchekwa, jiri, nyefee, gosipụta, bipụta, mụta ma kesaa okwu gị n'ụdị ọ bụla, gụnyere mana na ọnweghị oke na blọọgụ, n'akwụkwọ, vidiyo, ma ọ bụ ngosi.
Na nkenke, ebum n’uche m bụ ịnabata mkparịta ụka na-adọrọ mmasị nke ndị na-echebara echiche, ndị eziokwu na ndị na-akwanyere ugwu ugwu. Ekwenyere m na iwu amụma a dị mfe ga-akwado nke a.
Gbanwee OGO: Dị ka ọ bụla nke ibe nchịkwa na nchịkwa iwu anyị, ọdịnaya nke ibe a nwere ike ịgbanwe na oge. N'ihi ya, peeji a nwere ike ịgụ dị iche iche maka nleta gị ọzọ. Mgbanwe ndị a dị mkpa, ma rụpụta ya site na My Traffic Blog, iji kpuchido gị na weebụsaịtị My Traffic Blog. Ọ bụrụ na ibe a dị gị mkpa, ị kwesịrị ị na-elele anya ugboro ugboro n'ihi na ọ nweghị ọkwa ọzọ banyere ọdịnaya agbanweela ga-enye tupu ma ọ bụ mgbe mgbanwe gbanwere.
WARDỌ AKA NA NTOP N'OPLỌ NT :TA: Iwu na akwụkwọ nhazi na weebụsaịtị a, gụnyere nke a, bụ onye ọka iwu depụtara nke ọma. Anyị na My Traffic Blog ugwo iji ikikere iji ihe ndị a iwu mara na nhazi peeji nke na My Traffic Blog maka nchekwa gị na nke anyị. Enwere ike iji ihe a n'ụzọ ọ bụla maka ebumnuche ọ bụla yana ejiri ikike na-egbu egbu site na Copyscape iji chọpụta ndị na-emebi iwu.